Amboary ny WordPress ho 2.05 raha tsy manelingelina ny tranokalanao! | Martech Zone
Amboary ny WordPress ho 2.05 raha tsy manelingelina ny tranokalanao!
Sabotsy, Oktobra 28, 2006 Talata, Oktobra 4, 2011 Douglas Karr
Tiako ny WordPress ary omeko azy amin'ny mpanjifako rehetra. Androany, navoaka ny kinova farany. Azonao atao ny mamaky momba ny fanamboarana ary misintona ny fanavaozana Eto. Ireto misy torohevitra vitsivitsy amin'ny fanavaozana:
FANAMARIHANA: Miezaha hisoroka ny 'fanapahana' ny kaody fototra ao amin'ny WordPress, manamora kokoa ny fanavaozana izany. Manana 'hacks' vitsivitsy aho saingy mitazona azy ireo voasoratra mba hahafahako misintona ny fanovana farany aho rehefa mandroso. Aza atao koa ny mametraka karazana rakitra na lahatahiry manokana ao anaty fampirimana ivelanao wp-afa-po fampirimana.
Raha mbola tsy nijirika WordPress ianao, dia mahitsy hatrany ny fizotrana fanavaozana (an'ny sary ny Panic's Transmit 3.5.5)
1. Sokafy ny mpanjifa FTP anao, safidio ny rakitra rehetra avy amin'ny fanavaozana ny WordPress fa ATAORANA ny wp-afa-po go foldara. Adikao amin'ny lahatahiry sy fisie efa misy.
2. Ankehitriny, sokafy ny wp-afa-po fampirimana ao amin'ny lahatahiry loharano sy toerananao. Adikao ilay rakitra index.php.
3. Farany, mikorisa amin'ny wp-afa-po zana-tsipika ao amin'ny lahatahiry sy ny fampirimana itodiana. Adikao ny lohahevitra sy ny plugins raha ilaina, mba tsy hamafana ireo plugins sy lohahevitra nampianao sy novainao.
4. Ny dingana manaraka ataonao dia ny miditra ao amin'ny interface interface (wp-Admin). Hasaina hanavao ny angona-tahiry ianao. Tsindrio bokotra iray dia vita ianao!
Any no anananao, havaozina ianao. Manantena aho fa hanampy anao ity!
Maninona ny Sakafo Alika no manana fandokoana sakafo
iElegance? Ny herinandro voalohany nifindrako tany amin'ny MacBook Pro
29 Okt 2006 amin'ny 10:53 PM
Apple-Shift-3 ary ny pikantsary dia voatahiry ao amin'ny biraoko. Tsy misy 'Print-Screen' na 'Alt-Print-Screen', Open Illustrator, apetaho, amboary, tehirizo ho an'ny tranonkala, ovay ny habeny, apetraho ny karazana sary, tehirizo.
🙂 Tena mora izany!
30 Oktobra 2006 à 7:44
Vao haingana aho no nanamboatra ny iBook G3 fotsy taloha. Mandeha tsara ny Tiger izy io ary manasaraka azy ary mamerina azy indray dia tsio-drivotra noho ny torolalana azo ampiasaina amin'ny ifixit.com. Tsy ho afaka hiteny an'izany amin'ny PC ianao raha tsy mahay manasaraka azy ireo; izaho, tsy mbola nanao zavatra toy izany aho hatrizay.
Rehefa maty ny PC amin'ny farany, ny ankohonanay dia, fara faharatsiny, hifindra amin'ny Mac Mini. Tsy liana mihitsy aho ny hanakaiky ny solosaina rehetra mampiasa Vista.
Marina ny momba ny OS. Ny GUI dia mahafinaritra sy intuitive.
30 Okt 2006 amin'ny 7:26 PM
Vao nahavita ny fanavaozana, niasa tsy nisy olana. Misaotra!